That's so good, right?: ယုန်ကလေးရဲ့ကိုကို
'ကိုကို့ကို တကယ်ချစ်ခဲ့တာပါ။ ဘ၀မှာ အဦးဆုံးနှင့် အသည်း ထဲ တဆုံးဓားနှင့်ထိုးသလို စူးစူးနစ်နစ်ပေါ့။'
'ကိုကိုနှင့် လူခြင်းမတွေ့ခင် Online မှာ စကားတွေပြောကြ၊ ကိုယ့်အကြောင်း သူ့အကြောင်း ဝေမျှကြ၊ ပျော်စရာဝမ်းနည်း စရာ တွေပြောနေကြချိန်တုန်းက ရင်ထဲ တဆတ်ဆတ်ခုန်နေ တာ ယုံမယ်မထင်ဘူး ဘယ်သူမှ။'
'ကိုကိုက ရွာတာများလွန်းလို့ မိုးကိုငြိုငြင်လာတာလား၊ ဒါမှ မဟုတ် ဖက်စွတ်မိုးလောက် ဖုံသိပ်ရုံလောက်ပဲ ရည်ရွယ်တာ လားဗျာ။ တမင်တကာများ ရွာသွန်းစေချင်ရော့သလား။'
မှန်ပေါ်မှာ ပေါ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို အနားသတ်နေတဲ့ ဆံနွယ်မရှည့်တရှည်ကို နည်းနည်းစုစည်းလိုက်ကာ သပ်ရပ် အောင် လုပ်လိုက်ပြီးမှ မျက်ကပ်မှန် မတပ်ရသေးမှန်း သတိရ တယ်။ ဒီနေ့စတူဒီယိုသွားမှာဆိုတော့ မျက်မှန်ထူထူတပ်သွား လို့ ဘယ်ဖြစ်မလည်း။
ကိုယ်ဝါသနာပါရာကို လုပ်နေရရင် ပျော်ရွှင်မြူးကြွနေတတ်ကြ တာ အမှန်ဗျ။ အခုသီချင်းဆိုတာ ၀ါသနာပါတဲ့ ကျွန်တော် သီချင်းတွေစဆိုနေရပြီ၊ အတွဲခွေတွေမှာ ကျိုကြားပါနေရပြီဆို တော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အိုကေမှ စိုပြေနေပါပြီ။
နားမှာတပ်ထားတဲ့ Head phone ကို အသာဖြုတ် သူ့နေရာသူ ထားပြီး အသံသွင်းခန်းထဲက ထွက်လာချိန်မှာ ကျောပိုး အိတ် ထဲက ဖုန်းသံက တ၀ုတ်ဝုတ် ထဟောင်သလေ။ ပါပီ့အသံလေး သဘောကျလို့ ringtone လုပ်ထားတာ။
'မင်းကချစ်ဖို့ကောင်းသား၊ ကိုယ့်မှာ ညီမရှိတော့ ကိုယ့်ညီငယ် လေးတစ်ယောက်လို ချစ်ချင်တယ် ရမလား?'
ချစ်ချင်သလိုချစ်တဲ့ ဘာကိုရည်ရွယ်သလည်း မသိပါဘူး။ ရင်ထဲ တော့ တစ်မျိုးတမည်ဖြစ်သွားရပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ ကျွန်တော့်မှာ ညီငယ်လေးမရှိတာ၊ ပြီးတော့ ကောင်လေးရဲ့ အစ်ကိုခေါ်သံဟာ ကြည်နူးစရာ အကောင်းသားမဟုတ်လား?
'အစ်ကို အခုမှ ထတာလားဗျ၊ တစ်ခုပြောမလို့...ညီတို့...ဟို ခင် တာလည်းကြာပြီ မုံရွာကိုလာလည်ပါလား'
'Good တာပေါ့ ကိုယ်လည်း ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းအားနေတာ။ မုံရွာလာခဲ့မယ်လေ။ ညီတို့အိမ်မှာတော့ မအိပ်ဖူးနော်.....ဟာ... မတည်းဘူးပြောတာကွ...မင်းကလည်း'
ဒီအတောအတွင်း နယ်ရှိုးတွေမှာ လိုက်ဆိုစရာအစီအစဉ်မရှိတာ နဲ့အတော်ပါပဲ။ မာမီတို့လည်း အလုပ်မများတုန်း အလည် သွား ဦးမှပါ။ ကောင်လေးက ဖော်ရွေတယ် ခင်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဘာ ပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ထဲမှာ နှစ်လိုဖွယ် ခံစားမှုကိုဖြစ်ထွက်ခံစား ရပါ တယ် သူနဲ့ပတ်သက်ရတာ။
အ၀တ်တွေ အစုံအလင်ထည့်၊ ပြီးတော့ ပိုက်ဆံလုံလောက် အောင်ဖြည့်ကာ အိတ်ထဲထည့်ထားတဲ့ ကားလတ်မှတ်ကို စမ်း ကြည့်မိတော့ ခုလုခုလုနဲ့။ နှိုက်ကြည့်လိုက်မိမှ ကောင်လေး အတွက်ဝယ်ထားတဲ့ iPod ဖြစ်နေတယ်။ ဆိုထားတဲ့ သီချင်း လေးတွေ သွင်းပေးသွားဦးမှပါပဲ။ ဒါမှ သူလေးနားထောင်ဖြစ်မှာ။
'ဟုတ်ကဲ့မာမီ..သားမဆိုးပါဘူးဗျာ။ မုံရွာက သူငယ်ချင်းဆီ အ လည်သွားမှာ။ မသောက်ဖူး စိတ်ချ'
ကားဂိတ်သွားခါနီး မာမီ့ကိုကန်တော့ချိန်မှာ စိတ်မပူဖို့ပြောရပါ တယ်။ ကလေးမဟုတ်ပေမဲ့ ကျွန်တော်က တစ်ခါတလေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီး Johnny Walker လေးမော့တတ်တာ ကြောင့်လေ။
'မင်းတို့မုံရွာကလည်းကွာ လည်စရာသိပ်မရှိဘူးနော်။ တစ်ပတ် တောင်မပြည့်သေးဘူး ကုန်သွားတာပဲ'
ကောင်လေးတို့အိမ်မှာ မတည်းဖြစ်ပေမဲ့ မုံရွာဟိုတယ်မှာ အခန်းယူပြီး နားဖြစ်ပါတယ်။ ရောက်စရက်တွေမှာတော့ ဧည့် ၀တ်ကျေပွန်မှုသက်သက်လို့ထင်ပေမယ့် ဒီကောင်လေး တိမ်း ညွှတ်ပုံကတော့ တစ်မျိုး။
အခုလည်း တနေကုန်သွားလာထားတာဆိုတော့ ငြောင်းငြာနေ တာကြောင့် ရေချိုးခန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကောင်လေးကတော့ ပေး ထားတဲ့လက်ဆောင်နဲ့အတူ ခုတင်ပေါ်မှာငြိမ့်နေတာပေါ့။
အေးမြနေတဲ့ ရေရဲ့အထိအတွေ့ကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံးလန်း ဆန်းသွားသလို၊ ရေချိုးဆပ်ပြာရည်အသစ်ကပေးတဲ့ မွှေးပျံ့မှု ကလည်း စိတ်ကိုနွေးထွေးစေသား။ အတန်ကြာ ရေချိုးပြီး နောက် အခန်းတွင်းပြန်ဝင်ခဲ့တော့ ကောင်လေး ကျွန်တော့် မျက်နှာဆီကို ကြည့်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေက ရီဝေေ၀ပါ။
'ဒီမွှေးညှင်းနုလေးတွေက ဘာကြောင့်ရင်ဘတ်ကနေ အောက် နားအထိဆက်နေရတာလဲဟင်'
တရှိန်ထိုး ဆူတက်လာတဲ့ သွေးတွေ နှုတ်ခမ်းဖျားဆီရောက်ရှိ ကုန်ပြီထင်ပါရဲ့။ တစ်ကိုယ်လုံးတုန်ခါသွားရသလိုပဲ ကောင်လေး အနမ်းကျွမ်းကျင်ပေစွ။ နောက်ပြီး သူ့ရဲ့နူးညံ့တဲ့ ပခုံးသားကို ကိုင်တွယ်မိချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲ သူတိုးဝင်လာ တယ်။
ခါးမှာပတ်ထားတဲ့ တဘက်ဖြူဟာ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ပုံလျက်ကျ နေသလို ဂျင်းတွေ တီရှပ်တွေနဲ့အတူ iPod ဟာလည်း အတူ လှဲလျောင်းလျက်။
ကိုယ့်ကိုချစ်သည်ဆိုသော ကောင်လေးတစ်ယောက်၊ ကိုယ့်ကို ဂရုစိုက်သောကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိသည်ဆိုတော့ ပျော်မိ သလိုပါ။ သူပို့ပေးသော အစားအသောက်များ၊ အညာအထည် များ၊ မနက်ခင်းတိုင်းလာနေကျ ဖုန်းထဲက အသံ တွေကလည်း နားဝင်ချိုမြိန်ပေစွ။
မထူးဆန်းဘူးလား? အစပိုင်းမှာတော့ ထူးဆန်းပါသည်။ သူက မိန်းကလေးတစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့ဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် ရင်ခုန်သံတွေ ပူနွေးစေတာ၊ မြန်လာစေတာကို ပေးစွမ်းနေ တယ်။
ရန်ကုန်ရောက်လာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်၊ ခင်မင်စေတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ညီလေးဆိုပြီး အပေါင်းအသင်းတွေဆီ မိတ်ဆက်ပေးဖြစ်တယ်။
အိမ်က မာမီတို့ကလည်း သူ့ကိုတော်တော်ချစ်ကြတာ။ ဒယ်ဒီ ကဆို သားငယ်လို့ခေါ်သည်အထိ။ ရန်ကုန်ကို သူလာလည် သည့်အခါ ကျွန်တော့်အခန်းမှာသာ အတူတူ အပ်စက်ဖြစ်ကြ လေသတည်းပေါ့။
ကိုကို လို့ပဲခေါ်မယ်ဗျာ။ တစ်ခါမှ ရင်ထဲမဖြစ်ပေါ်ဘူးတဲ့ ရင်ခုန်မှု တွေ ကိုကိုနဲ့မှဖြစ်ပေါ်တာ။ ကိုကိုက စကားပြော ကောင်း တယ်။ Online မှာဆို အသံချိုချိုနှင့် အမြဲပျော်ရွှင်စေတာ။ အ တော်လည်း တတ်နိုင်တယ် ရင်ခုန်သံတွေ ဆူတက်လာအောင် သူအမြဲလုပ်တယ်။
စခင်ကာစကတော့ အခုပုံစံမဟုတ်ပါဘူး။ ခပ်တည်တည်ကြီးနဲ့ စကားပြောတာကလည်း တောင့်တောင့်ကြီး။ သုံးလေး ရက် လောက်ကြာတော့ အဲဒီ့ပုံစံမဟုတ်တော့ဘူး အစအနောက် လေးတွေ ဟာသလေးတွေနှင့်။
ရင်ထဲဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဗျာ။ လူတစ်ယောက်အပေါ် မမြင်ဘူး ပဲ ဒီလောက်ပျော်ဝင်သွားမိစေတယ်ဆိုတာ။ စကားလုံး တွေ ကြောင့် ဟုတ်ဟန်မတူပါဘူး ကိုယ်တိုင်က အစိမ်းသက်သက် ဖြစ်နေလို့လား အချစ်နဲ့လေ။
မနက် မနက် အလုပ်ကိုရောက်တော့လည်း သူပြောတဲ့စကား တွေကိုကြားနေတာ။ အိမ်ရောက်လို့ အ၀တ်တွေလည်း တော့ လည်း သူကြိုက်တဲ့ အင်္ကျီအရောင်လေးတွေကို သတိရနေ တယ်။ ထမင်းစားတော့ရော သူကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ဟင်းလေး တွေ....ကုန်ကုန်ပြောရရင် အချိုတည်းဖို့ မလိုင်လုံးစားရင် တောင် ရင်ထဲချိုပြီး အေးနှင့်နေပြီ။
'ကိုယ်တို့ အခုမှတွေ့ဖြစ်ကြတာနော် အပြင်မှာ...မင်းက ကိုယ့် ထက်ငယ်တာပဲ'
ကိုကို မသိပါဘူး ညီံခြေဖျားလက်ဖျားတွေအေးစက်နေတယ်ဆို တာ။ စကားတွေပြောနေရတာ တိမ်တွေထဲလွင့်နေ သလိုပါပဲ။ အောက်ခြေလွတ်နေတဲ့ ခံစားမှုမျိုးဖြစ်နေတာ။ ကိုကို ဘာတွေ ပြောနေလည်း.. ညီကတော့ ရင်ခုန်နေတာကိုပဲ သိတယ်ဗျာ..။
'ဒါပေါ့....ကိုသိပ်ပျော်သွားပြီ Bunny မင်းလေးက ချစ်ဖို့ တကယ်ကောင်းတာပဲ'
ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့လားကိုကို။ ကိုကိုခေါ်သလိုဆို Bunny ရင်ထဲမှာလည်း ထို့အတူပါပဲဗျာ။
အတူအပြင်ကိုထွက် မြို့ထဲ လျှောက်သွား သီချင်းစီဒီတွေဝင်ကြည့် လမ်း၂၀ နားက ဖက် ထုပ်ဆီချက်တို့ သံဈေးထိပ်နားက ကော်ကြော်တို့ စားရတာ အားလုံးဟာ အရသာကိုရှိလို့ ဒီနေ့ဟာ။
ခင်ဗျားလေးကလေ တဲ့တိုးကြီးပဲပြောတယ်။ တဖက်သား ဘယ် လိုခံစားရမယ်ဆိုတာ ထည့်မစဉ်းစားဘူး။
Bunny မှ ငါးပိရည်မကျိုတတ်တာ၊ တခြားဟင်းတွေကတော့ အ ဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား?
ကိုကိုရုံးကိုလာကြိုတာ အရမ်းပျော်တာပေါ့ဗျ။ 'Bunny အခုရုံး ခဏပြန်သွားရဦးမယ်။ ကိုကို နေခဲ့ဦးနော် Bunny ပြန်လာမှ အိမ်ကို လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ'။
'စိတ်မဆိုးပါဘူး ကိုကိုရယ်၊ ပွင့်လင်းတာကြိုက်ပါတယ်။ ကိုကို့ မာမီချက်တာလိုတော့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ။ ကိုယ်ချက်ကျွေးတာ ကို သဘောမကျဘူးဆိုပြီး နည်းနည်းတော့ အောင့်တာပေါ့ဗျ'
မိုးဖွားလေးတွေကျတဲ့အချိန်မှ ကိုကို့ဆီဖုန်းဆက်ရမှာကို အား တင်းဖြစ်တယ်။ ကိုကိုစိတ်ခုသွားသလားမသိ။ Bunny.... Bunny အတွေ့အကြုံမရှိတော့၊ နောက်ပြီး....Bunny ကြောက် လို့ပါကိုကိုရယ်။
Bunny တို့တွေ့ဖြစ်ကြတာ ဒီကိစ္စက အရေးပိုကြီးနေသလား? ကိုကိုခဏ ခဏတောင်းဆိုတာကို မလိုက်လျောနိုင် တာ ကြောင့် ကိုကိုရှက်ပြီး စိတ်ခုသွားတယ်။
'ကိုကို Bunny တို့ တွေ့နေကြ ဆိုင်လေးကိုလာခဲ့နော်။ ဘာ မှမလုပ်ပါဘူးဗျာ ကိုကိုနဲ့တွေ့ချင်လို့'
ဆိုင်ထဲ ထိုင်စောင့်ဖြစ်တဲ့ခဏ ရင်ထဲမှာ ရင်ခုန်သံအရမ်းပြင်း နေသလို ခံစားရတယ်။ သူ့ကိုချစ်ရင် သူ့ဆန္ဒအားလုံး လိုက် လျောရမှာဆိုတော့ ကိုယ်တကယ်လိုက်လျောနိုင်ပါ့မလားတွေး ပြီးတော့....
'ဟာဗျာ ကိုကိုကလည်း သေချာမကြည့်ဘူး၊ ပွင့်တာတော့ ပွင့်တာပေါ့ ပြန်ဖွင့်ပြီး ဖုန်း screen ကို ကြည့်လေဗျာ'
'ဟုတ်တယ် တွေ့ပြီလား Bunny Love Ko Ko ဆိုတဲ့ စာတမ်း လေးကို'
ကိုကို အရမ်းပျော်သွားတာ ကျေနပ်ပါတယ်။ မျက်နှာမှာ အပြုံး ကိုဝေလို့။ အမြဲပျော်ရွှင်စေချင်တာ ပြုံးနေစေချင်တာ Bunny ဆန္ဒပါ။
'ကိုကိုက ဘာကြောင့် လှည့်လှည့်ကြည့်ရတာလည်း ခေါ်သံ ကြားတာနဲ့။ ကိုကို့နာမည်ကို ခေါ်တာမှမဟုတ်တာပဲ'
'Bunny ကလည်းကွာ ကိုယ်က မျက်မှန်ပါဝါများတော့ တည့် တည့်ကြီးတိုးတာတောင် မမြင်ဘူး။ မျက်စိမှုန်တဲ့အပြင် နား မကြားဘူးလားထင်မှာစိုးလို့ပါကွာ'
'ကိုကို ဒီသီချင်းလေးကို Bunny အတွက် သီချင်းအဖြစ်ရေးပေး ပါလားဗျာ'
'Wan Lee Hon ရဲ့ သီချင်းလေးကို Bunny အတွက်လက် ဆောင်အဖြစ်ရေးပေးပါလား? ကိုကိုနားထောင်ပြီးရင် ကြိုက် သွား မှာပါ သူ့ရဲ့သံစဉ်လေးတွေကို။
'ကိုယ် ကော်ပီတော့မဆိုချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ Bunny အတွက်သီး သန့်အဖြစ်ရေးပေးမှာပေါ့ '
သီချင်းဆိုတာ သံစဉ်လှလှလေးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတတ်ကြ တယ်။ သီချင်းများစွာထဲမှာ ကိုယ့်အတွက် အထူးရည်ရွယ် ထား တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ နားထောင် ရတာ။ အထူးသဖြင့် ကိုကို့နှုတ်ဖျားက ထွက်ကျ လာမယ့် သီချင်းချိုချိုကို နားထောင်ပါရစေ။
ကိုကို ဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းဆိုတဲ့အခါ ကိုကို့မျက်နှာလေး ကြည့်ပြီး သံစဉ်ကြောမှာ မျောရတာ Bunny တော်တော်ကြိုက် တယ်
နယ်ရှိုးပွဲလာဆိုရင်း ကိုရေးပေးထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပိုင်းတစ်စကို ဆိုညည်းမိနေခြင်းပါ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ အသည်းထဲမှာ သူပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ဟုတ်တယ် ကိုပဲတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာ ကြာ လာလေလေ ရင်ထဲပိုသိလာလေဖြစ်နေပါပြီ။ မနက်ခင်းတိုင်း လာနေကျ ဖုန်းသံလေးကလည်း တိတ်ဆိတ်နေတာကြာပြီ။ အဲဒီ့ဖုန်းသံကို ကျွန်တော် မေ့ချင်နေပြီဖြစ် သလို မမျှော်လင့်ချင် တော့ပါဘူး။
'အင်း....လားရှိုးမှာဟုတ်လား အော်အမျိုးတွေဆီသွားလည်တာ လား ညီ'
See you လို့မပြောဘဲ ဖုန်းပိတ်လိုက်တယ်။ ဖုန်းသံကိုမမျှော် လင့်ပါဘူးဆိုမှ ကြားရပါတဲ့ ဖုန်းသံလေးပါ။ မုံရွာက ကောင်လေး ဆက်တာလေ။ လားရှိုးက အမျိုးတွေဆီသွားလည်သတဲ့။ သူ့ အသံကြားရတာ ရင်ထဲဘယ်လိုမှ မခုန်တော့ပါ။
သူ့အလိုလို ဖြစ်နေတဲ့ ဖြစ်တည်နေတဲ့ ခံစားချက်ဖြစ်မှန်း ကျွန်တော်သိ တယ်။
မြို့ထဲအနှံ့၊ ဘုရားတွေ၊ ဥယျာဉ်တွေ နေရာများစွာကိုလည်း ရောက်ပါတယ်။ ခိုကလေးတွေ အစာကျွေးရင်း နှစ်ဦးသား ကြည်နူးကြတာလည်းအခါခါ။
မင်းလေးရယ်လိုက်ရင် အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ Bunny ။ မင်းအပြုံးတွေကို တစ်သက်လုံးပိုင်ဆိုင်ချင်လိုက်တာ။ ပိုင် ဆိုင်ခွင့်ရအောင်ကိုယ်ကြိုးစားမယ်။
Bus ပေါ်မှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချိုချဉ်ခွင့်ကျွေးဖြစ် တော့ စပယ်ယာက မျက်လုံးကြီးပြူးလို့။ ယောက်ျားလေး နှစ် ယောက်က ဒီလိုကြင်နာပြကြဖို့လိုသလားပေါ့လေ။
‘ကိုလေး...ကိုလေး....ထတော့လေဗျာ ခဏနေရန်ကုန်ပြန်ဖို့ ကားရောက်လာတော့မှာ’
‘အင်း...ကျေးဇူး...ရည်းစားကိုလွမ်းပြီး ငိုက်သွားမိတာဗျ...ဟဲ ဟဲ’
‘ဖြစ်ရမယ်....ဒီမှာ ကိုလေးအကြိုက် လိမ္မော်ရည်သောက်လိုက် ဦး ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်က လက်ဆောင်တဲ့ လာပေးသွား တာ’
'မင်းကွာ.....စိတ်တိုတယ်၊ မောမောပန်းပန်းပြန်လာသူကို ရင်ဝ ဆောင့်ကန်တယ်'
ရင်ထဲထိတ်ကနဲဖြစ်သွားမိတယ်။ စိုးရိမ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တာ။ သူ့အရင်တစ်ယောက်ကို ငြိခဲ့တာ တွေကို လေ။ အခုအလုပ်မအားလို့ပဲဖြစ်မှာပါ။
အရင်အခေါက်တွေပြန်လာတုန်းကတော့ အပြေးလေးရောက် လာပြီး ရင်ထဲခိုဝင်ကြည်နူးရတာအမော။ ညစ်ပေနေတဲ့ အ၀တ် အစားတွေကို သူကိုယ်တိုင်လျှော်ဖို့ စီစဉ်ရတာလည်းပါရဲ့။ ၀ယ် လာတတ်တဲ့ နယ်ကမုန့်ကလေးတွေကိုလည်း နှစ်သက်စွာစား သေး။
၂၀၀၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့ ကောင်းကင် ကြီး တစ်ခုလုံးလည်း အုံ့မှိုင်းနေတယ်။ မိုးများရွာမလားမသိဘူး။ ဆုံနေကြ Moon Bakery ဆိုင်လေးရဲ့အပေါ်ထပ်မှာစောင့် နေမိပါတယ်။ ဘာလို့လည်းမသိ လမ်းပေါ်မှာ ရုံးစုရုံးစုနဲ့ လူတွေ။
မိနစ်အနည်းငယ်ထပ်စောင့်ပြီးချိန်မှာတော့ ...သူ ခပ်နှေးနှေး ခြေလှမ်းတွေနှင့် ဆိုင်ထဲလှမ်းဝင်လာတာကိုမြင်ရတယ်။ ပြီး တော့......ကျွန်တော်ထိုင်နေရာကို တစ်လှမ်းခြင်းတက်လာ တယ်။
သူ့ကို ဘာမှမပြောဘဲ ငေးကြည့်ဖြစ်သလို သူကလည်း ကျွန်တော့်မျက်နှာကို စိုက်ကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့ ကျောပိုး အိတ် ထဲက စာအိတ်နှစ်အိတ်ကိုထုတ်ပြီး ကျွန်တော့်ရှေ့ချပေး တယ်။
'ဘယ်အစောင်ကိုပဲရွေးရွေးပါ ကိုကိုဖတ်ရမယ့် ဖတ်သင့်တဲ့ စာပါ'
ဖတ်ရင်း သူ့မျက်နှာမော့ကြည့်တော့ မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေ ၀ဲလို့။
'ကိုကိုပြောတော့ မုံရွာက ကောင်လေးက ညီဝမ်းကွဲဆို။ ကိုကို ရယ် ရက်စက်လိုက်တာ။ သူဟာ Bunny ရဲ့ သူငယ်ချင်း အရင်း ကြီး ဖြစ်နေတာ မထူးဆန်းဘူးဆိုနိုင်ပေမဲ့ ကိုကိုဟာ Bunny တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်သူဖြစ်နေတာက ထုးဆန်းတယ် နော်။ မင်းရည်းစား ရပြီလားတဲ့။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရည်းစားဓာတ်ပုံကိုပြသ လို သူလည်းပြတယ်လေ။ ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ တစ်ယောက် တည်း ဖြစ်နေတယ်ဗျ'
မျက်ရည်တွေ ဖြိုင်ဖြိုင်ကျကာ သူလှေကားကနေ ပြေးဆင်း၊ ဆိုင်ထဲကနေပြေးထွက်သွားတော့တာ ဝေါကနဲ ပြိုကျလာတဲ့ ဆူးလေဘက်ကလာတဲ့ လူအုပ်ကြားထဲကိုလေ။ ကျွန်တော်မျက် လုံးပြူးသွားရသလို ရင်ထဲစိုးရိမ်စိတ်တွေငယ်ထိပ်တက် စောင့် ကာ သူ့နောက်ပြေးလိုက်သွားမိတယ်။ လမ်းမကြီးတစ်လျှောက် လိုက်ရင်း ရုပ်ရှင်ရုံထဲပြေးဝင်သွားတာကြောင့် ကျွန်တော်လည်း လိုက်သွားကာ သူ့ဘေးမှာ ထိုင်ချဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုဖက်တွယ် မိရတော့ ကျွန်တော့်ပခုံးမှာခိုမှီကာ ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုတော့တာ ပေါ့။
မလိမ်ခဲ့ပါဘူး......မလိမ်ညာခဲ့ပါဘူး Bunny ရယ် ညီဝမ်းကွဲဆို တာက ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ သူဟာ ချစ်သူအဖြစ် ခံစားသတ်မှတ် ခဲ့တာမှမဟုတ်တာ။ ညီလေးတစ်ယောက်အဖြစ်သာ။
မိုးရေတွေနဲ့အပြိုင် ကိုယ့်မျက်ဝန်းမှာလည်း ပုလဲတွေသီကုံး နေပြီပေါ့။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်း မာမီတို့အမေးကို မဖြေဖြစ်ပါဘူး။ အလိုက်သိတဲ့ ဒယ်ဒီက သားကြိုက်တတ်တဲ့ ကော်ဖီ ပူလေး သောက်လိုက်ပါ အ၀တ်လဲပြီးရင်တဲ့။ သား.....သားရင်ထဲပူ နေပြီ ဒယ်ဒီ။
'သား....မင်းဘာတွေခံစားနေရလည်းကွာ? ရည်းစားနှင့် အဆင်မပြေဘူးလား?'
ဘာမှ....ဘာမှ စိတ်မပါဘူး ဒယ်ဒီတို့ရေ။ သားဝမ်းနည်းနေတာ ကြေကွဲနေတာ ဒိုင်ယာရီတွေ ရေးရင်း သီချင်းဆိုနေတာ ရင်ထဲ ပွင့်ထွက်တော့မယ့် ငိုရှိုက်သံတွေ ဘယ်သူ့ကိုမှ မကြားစေချင် လို့ပါဗျာ။
Bunny ရယ် မင်းအပြုံးလေးကိုချစ်တယ်။ မင်းအနမ်းကိုသတိရ တယ်။ ဂရုတစိုက်ဖေးမမှုကို တမ်းတတယ်။
'လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသောဖုန်းမှာ စက်ပိတ်ထားပါသဖြင့် ခေါ်ဆို၍ မရနိုင်ပါရှင်'
'မိဆွေ.....Bunny ဒီနေ့ရုံးတက်လား? မလာတော့ဘူးဟုတ် လား?.....သူ...သူဘာပြောသွားလဲဟင်?'
'မနက်က မန်နေဂျာရုံးခန်းကိုလာတယ်။ Resign လုပ်တာလား မသိဘူးရှင့်'
ဖုန်းခေါ်လိုက်ရင်ကြားနေကြ အသံချိုချိုကိုလည်း ခေါ်လိုက် တိုင်း လူကြီးမင်းဆီက မလွတ်တော့ဘူး။ အိမ်ဖုန်းလည်းမကိုင်။
သွားနေကြ လာနေကြ နေရာတွေမှာလည်း တနေကုန်ထိုင် ကြည့်တာတောင်မတွေ့ရ။
သိရဲ့လား Bunny ကိုယ်မင်းကိုချိုးခဲ့တာမဟုတ်သလို အပျော် အဖြစ်အချစ်ပေးတမ်းကစားခဲ့တာ မဟုတ်ရပါဘူး။
'၀ုန်း'ကနဲ မြည်သံနှင့်အတူ လျှပ်စီးတစ်ချက်လက်သွားတယ်။ မိုးစက်တွေ မြေပြင်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းပြေးဆင်းလာကြတာ လူတွေ ဟိုသည်ပြေးလွှား ခိုနားရာ အမိုးရှိရာဆီပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့.....ဦးတည်ရာမဲ့ ကားကိုမောင်းလာမိတာ မိုး တွေသည်းနေတဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမဆီ။
'တီ...တီ....အရေးထဲ ကားတွေကလည်း ကိုယ့်လမ်းကိုမမောင်း ဘူး'
ဥပေက္ခာဆိုတာ ပြုသူကတော့မသိပေမဲ့ အပြုခံရသူကတော့ အ တော်ခံရခက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကများ ဥပေက္ခာပြုသွားရင် ဘယ်လောက်များ ခံရခက်မည်လည်း ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပါလား ဗျာ။
ဒီလောက်တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ လူတစ်ယောက်ကို မင်း မရှာနိုင်ဘူးဆိုတာ ညံ့လို့ပဲဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်အတော် ညံ့ တာပါပဲ။ သူ့အလုပ်၊ သူ့သူငယ်ချင်းတွေဆီ။ ကုန်ကုန်ပြောရ ရင် မုံရွာက ကောင်လေးကိုတောင် မရှက်နိုင်အားပဲဖုန်းဆက် မေးမိတဲ့အထိ။
'Online က တွေ့တဲ့ကောင်လေးဆိုပြီး ပေါ့ပေါ့တန်တန် သ ဘောထားလိုက်တာလား အစ်ကိုရယ်..။ အစ်ကို အသစ် ရှာနေ ပြီဆိုတော့ ငယ်လေးအနားမှာ နေရတာမပျော်တော့ လို့ပေါ့ နော်။ ငယ်လေးကို မချစ်တော့ရင်လဲ လုံးဝမဆက်သွယ်ပဲ ထား ခဲ့ပါလားအစ်ကိုရယ်။ အခုတော့ သိရက်နှင့်များ ရက်စက်တဲ့သ ဘောနှင့် မေးတာလားဗျာ'
တုန့်ပြန်စကားတွေတောင်နှုတ်က မထွက်မိတော့ပါ။ သူပြောသ လို ကျွန်တော့်အပြုအမူတွေက ဖြစ်နေခဲ့တာကိုးလေ။ကျွန်တော့် ရင်ထဲ နေဆယ်စင်းဖြစ်နေရပါပြီ။
'အော်...မိဆွေလား....တကယ်လား...သူအိမ်ပြန်ရောက်နေ တယ်။ သူ့အမေအတွက် အစီအစဉ်လုပ်နေတာ။ ဟာ...ရပါ တယ် ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးသိရတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်လှ ပါပြီ'
'အစီအစဉ်တဲ့....ကိုယ့်ကမ္ဘာထဲက ထွက်သွားမယ့် အစီအစဉ် စလုပ်နေပြီပေါ့?'
'ကိုကိုပဲပြောခဲ့တာလေ.....Bunny စိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင် ကိုကို့ ကို မုန်းချင်လည်းမုန်းပါ။ ကိုကို့မျက်နှာကို မမြင်ချင် ဘူးဆိုရင်လည်း မမြင်စေရပါဘူးဆို။ အခုတော့ တွေ့ခွင့် တောင်းနေပြန်ပါပြီ'
'အဲဒီကိစ္စကို သိသိချင်း ကိုကို့ကို စိတ်နာတယ်၊ ကိုကို့ကို မုန်း တယ်၊ နောက်ဆုံး Bunny လုပ်ပေးနိုင်တာက ကိုကို့ကိုနား လည်ပေးလိုက်တာပါ'
'Bunny ဘက်ကိုလည်း ပြန်ကြည့်တဲ့အနေနဲ့ ထပ်ပြီး အဲဒီလို စကားတွေ မပြောပါနဲ့။ Bunny ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဘယ်လို နည်းနဲ့မှ ပြန်ပြင်မှာမဟုတ်ဘူး'။
အရမ်းကိုလည်းရှက်မိပါတယ်....ဒါပေမယ့် Bunny အမှားကို ပြင်ရမယ်လေ..။ လူဆိုတာ ကျင့်ဝတ် စောင့်ထိန်းရတဲ့ သိက္ခာ တွေ အများကြီးရှိသေးတယ်။ ဘယ်သူမှမသိပါဘူးလို့ ပြောဦးမ လို့လား ကိုကို...မပြောပါနဲ့တော့ နောင်ဘ၀ဆိုတာ မရှိဘူးလို့ မယုံကြည်တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ဒါတွေကို ဘယ်နားလည် ပါ့မလဲ...ကိုကိုသာ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။ နောက်ပြီး ကိုကို ၀ါသနာပါတဲ့ အလုပ်တွေကို ကြိုးစားလုပ်ရင်း Bunny ကိုချစ်တဲ့ စိတ်တွေကို ဖြေဖျောက်ပါ......
တီးလုံးသံတွေကြားမှာ မြူးကြွလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ လူအုပ်ကြားထဲ တိုးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ DJ ရဲ့အထူးပြလက်စွမ်းတွေနဲ့ သွက် လက်နေတဲ့ လူအုပ်ထဲမှာ ကိုယ်ရှာတွေ့ချင်တဲ့လူကို တွေ့ရဖို့ မိနစ်အတော်ကြာတယ်။
Bunny သွားဆွဲခေါ်လာတော့အလိုက်သင့်ပါလာတယ်။ ၀မ်းသာ သွားတာလား ပြောသမျှ အသာတကြည်လုပ်တယ်။ ဆိုဖာပေါ် မှာတင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေသွားယူရင်း သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို ကျေးဇူးစကားဆိုကာခေါ်ခဲ့ရပေါ့။
'ကိုကို....အရက်တွေသောက် ၊ ဒီလိုတွေနေပြလို့ ပြန်လာမယ် ထင်တာလား? အရက်တွေသောက်ပြီး ကိုယ့်ဘ၀ပျက်ပါပြီဆိုပြီး Bunny ပြန်လာစေချင်တာလား?'
Bunny ကြောင့် ကိုကိုဘ၀ပျက်တာမဟုတ်ဘူး။ ကိုကို့ကြောင့် သာ အနာဂတ်စိတ်ကူးတွေ အချစ်ဆိုတာတွေ ပျက်စီးသွားခဲ့ ရတာ။
ဟုတ်တယ်ကိုကို Bunny အိမ်ကိုမောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး ကိုကို့အိမ်ကိုခေါ်သွားနေတာပါ။ မူးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို စကားတောင်မပြောဘူး။ ကိုကိုဖြစ်နေလို့သာ....ကိုကိုဖြစ်နေ လို့သာပါဗျာ။
'Bunny....မင်းအိမ်ထဲက ထွက်လာမလား မလာဘူးလား ကိုယ့် အဆိုးမဆိုနဲ့နော်'
တကယ့်ကို အမူးသမားတစ်ယောက်လိုပါလားကိုကို ။ မတွေ့ ချင်တော့ဘူး မတွေ့လို့မရဘူးလား ကိုကိုရယ်။ ကြာရှည် တင်း ထားနိုင်မှာ မဟုတ်လို့ပါ။ ကြောင့် ငယ်လေးကို ကိုကိုသစ်စိမ်း ချိုးချိုးခဲ့တာတွေးမိတိုင်း စိတ်မကောင်းဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုကိုရယ် မပိုင်ဆိုင်ချင်တော့ဘူး။
အရမ်းပေါက်ကွဲနေတဲ့ ကိုကို...ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာဆိုတာ တောင် ဂရုမစိုက်တော့ဘူး။ အိမ်ရှေ့မှာ လာပြီး ထွက်ခဲ့ဖို့ခေါ် နေ တယ်။ ဘယ်အချိန် ဘာလုပ်တတ်တယ်ဆိုတာ သူသိနေ တော့လည်း ဘယ်လိုဆက်ပြီးရှောင်ရပါ့မလဲ။
'ကိုကို.....ကိုကိုရယ် ကျေးဇူးပြုပြီး အဲဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့...မလုပ် ပါနဲ့ဗျာ'
'Bunny....Bunny အိမ်ထဲလိုက်ခဲ့ပါကိုကို လူတွေကြည့်နေကြ ပြီ.....ဟာမဟုတ်ရပါဘူး လိုက်စေချင်ပါတယ် လာပါ'
မျက်နှာနီရဲနေအောင် ဒေါသတွေထွက်နေတယ်။ အရက်လည်း မမူးပါလား။ Sorry ပါဗျာ။ ကိုကို့မျက်ဝန်းတွေမှာ မျက်ရည် တွေ ၀ိုင်းနေတယ်။ အတူတူ ထိုင်နေကြရင်း စကားမဆိုဖြစ်ကြသလို တခြားဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပဲ အတူတူရှိကြတာ ညနေ စောင်းကနေ ညပိုင်း လမ်းမီးတွေ ထိန်လင်းလာချိန်အထိပေါ့။
ကိုကိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟင်းလေးတွေနဲ့ ညစာကို အတူစားဖြစ် ကြရင်း အရမ်းကိုရင်ခုန်လာမိတယ်။ ကိုကို့မျက်ဝန်း တွေဟာ လည်း တိမ်းမူးဖွယ်ရာ၊ နှုတ်ခမ်းစုစုလေးကလည်း စိုစွတ်လျှက်။ ဟင့်အင်....ကိုကို။
မညာဘူးကိုကို။ ချစ်နေဆဲပါပဲ။ ကိုကို့ပုံရိပ်တွေရှိနေဆဲပါဗျာ။ Bunny ရဲ့ရင်ထဲရှိနေဆဲ ကိုကို့ပုံရိပ်တွေကို ကိုကို ကိုယ်တိုင် မဖျက်ဆီးပါနဲ့။ Bunny's ကိုကိုဆိုတာ လိမ္မာယဉ်ကျေးသူ တစ်ပါးကို အလိုက်သိတဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကောင်လေးလေ...
မုန်းသွားလို့ ခွင့်မပြုတာမဟုတ်ရပါဘူးကိုကို။ အနမ်းလေး လောက်သာ ကျေနပ်ပါတော့။ Bunny ချစ်မိတဲ့ချစ်သူအတွက် Bunnyမှာအချစ်ပဲရှိတယ်။ ကိုကိုရယ် ကိုကို့ကို Bunnyချစ်ပေ မယ့် လမ်းခွဲရလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူဆိုတာ ဟီရိသြတ္တပ တရားနဲ့ပြည့်စုံရတယ်။ အရှက်အကြောက်တရား .....လူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုတာတွေလေ.... Bunny သူများ ဆီကဖြတ် လုတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်မဖြစ်ချင်ဘူး...မဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူးဗျာ...
ဒီညလေးဟာ အမှတ်တရဖြစ်နေမှာပါ။ ကိုကို Bunny ကိုဖက်ပြီး ငိုခဲ့တော့ ချစ်တယ်ဆိုတာ အမှန်တကယ်ဖြစ်မှန်း သိလိုက်ရ တာ။ မငိုခဲ့ပေမယ့် ရင်ထဲမှာ မျက်ရည်တွေချောင်းဖြစ်နေပြီ။ ကိုကို့ရင်ခွင်ထဲ ငြိမ်သက်နေတာကိုပဲ ကျေနပ်ပါတော့...။
မဲမှောင်နေတဲ့ ညဟာ ပိုပြီးနက်လာသလို နှစ်ဦးသား မျက်ဝန်း အကြည့်တွေနဲ့သာငေးစိုက်ကြည့် ကြရင်း အဆုံးသတ်ကြပြီ။
ပထမရက် ။ ။ 'လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော တယ်လီ ဖုန်းမှာ လိုင်းမအားသေး.....'
ဒုတိယရက် ။ ။ 'လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော တယ်လီ ဖုန်းမှာ စက်ပိတ်ထားပါသဖြင့်....'
'ဟုတ်ကဲ့.....သားက Bunny သူငယ်ချင်းပါ '
'ခင်ဗျာ......သူနိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားပြီ...ဘယ်နိုင်ငံကိုလည်းခင်ဗျာ?...ဘယ်တော့ပြန်လာမလည်း?.....ဆက်သွယ်လို့ရ မယ့် လိပ်စာလေး...'
'သားက ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပြစေချင်ဘူးတဲ့ကွယ်'....တဲ့ Bunny လေးရဲ့မေမေကဆိုတယ်။ ရေးခိုင်းခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးကို ကိုကိုဆိုပြချင်တယ် ပေးချင်ပါတယ်။ မပိုင်ဆိုင်နိုင်တော့ဘူး ချစ် ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုတာကို သိနေပေမဲ့ ပက်သက်ခွင့်လေး တော့ လိုချင်တာပေါ့ဗျာ။ အခုတော့ အဝေးတစ်နေရာဆီထွက်သွား ပြီ....ထွက်သွားခဲ့ပြီ။
Bunny လေးသိရဲ့လား.....Bunnyရဲ့ဘ၀ကို မဖျက်ဆီးခဲ့ပါဘူး ကွာ Bunny ကိုညာခဲ့တယ်ဆိုတာ ကိုသိပ်ချစ်လွန်းလို့ပါ။
လှည့်စားဖို့အတွက်လည်း မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ်သေချာ ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ အသည်းထဲက Bunny ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။
သာယာတာမဟုတ်တဲ့ ချစ်ခြင်းအစစ်တွေ...အစစ်တွေပါ Bunny လေးရယ်။
အေးမြတဲ့ လေနုအေးတွေဟာ အင်းယားကန်ဘောင်ကိုဖြတ်ပြီး သူ့ဘေးကနေ အသာလျှောက်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ဆီ ရောက်လာ တယ်။ ခပ်ဖြေးဖြေးခြေလှမ်းတွေနဲ့ လျှောက်လှမ်းရင်း အိမ်ကို ပြန်လာဖြစ်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလလေးရဲ့ ညနေခင်း မှာပေါ့။
ကန်ဘောင်ပေါ်မှာတော့ ဒွိယံ ဒွိယံအတွဲလေးတွေက ကြည်နူး သာယာနေလိုက်ကြတာ။ ဟော...ကောင်ကလေး တစ်ယောက် က သူ့ကောင်မလေးကို ပါးပြင်အနမ်းပေးတာ နှင်းဆီခင်းပါး ပြင်ဖြစ်ရင်း ကောင်ကလေးကို လက်သီးဆုပ် နဲ့ထုလေတာ။
လွမ်းဆွတ်မှုဆိုတာ ရိုးများရိုးနေပြီထင်ပေ မဲ့.....တမ်းတမိသွား ပေါ့။
'ဒီနေ့လား....သား...သားသူငယ်ချင်းမွေးနေ့မို့ လက်ဆောင် ပေးမလို့ဝယ်လာတာပါ'
အခန်းထဲ ၀င်လာရင်း အ၀တ်ဘီရိုကြီးကို ဖွင့်လိုက်မိတော့ အ လယ်ဆင့်အခန်းငယ်လေးရဲ့နံရံမှာ ကိုယ်တို့နှစ်ဦးရဲ့ ဓာတ်ပုံ လေးတွေ၊ Bunny ရဲ့ ဓာတ်ပုံ stand လေးတွေအများကြီး။ ပြီးတော့နှစ်စဉ်မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးတွေ မပျက်တမ်းထည် ပေးနေဖြစ်တာ ဒီနေ့ မြို့ထဲသွားရင်း Bunny ကြိုက်တဲ့ရေမွှေး တွေ့လို့ ၀ယ်လာဖြစ်တယ် မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေါ့...Bunny ကြိုက်မှာပါ။
မွေးနေ့ရှင်အတွက်...သီချင်းလေးဆိုပြမယ်။ နားထောင်နေမယ် မဟုတ်လား Bunny?
ဂစ်တာလေးကို တိုးတိုးငြင်သာတီးရင်း Bunny အတွက်သီး သန့်သီချင်းလေးကို ဆိုပြနေဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ပါ အခု အချိန်မှာ ကိုတစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေပေမဲ့လည်း ကိုကိုကျေနပ်ပါ တယ်...။ တကယ်လို့ ကံတရားကပြန်ဆုံဆည်း ခွင့်ပေးမယ်ဆို ရင်တော့ ကိုကို...အပြစ်ကင်းတဲ့....ရင်ထဲက ကိုကိုအဖြစ် မြင်ရ ပါစေမယ်
Wrote by Alex aung (19/5/2010)
Posted by Alex Aung at 6:20 PM